SEO iyo SEO cusub | Martech Zone
SEO iyo SEO cusub
Isniin, Disembar 9, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
SEO waa dhintay. Waxaan sidaa u iri si ka fiican sanad ka hor walina waxaan hayaa qaar ka mid ah dadka SEO oo xanaaqsan oo faallo ka bixinaya boostada toddobaad kasta. Google wuxuu sii waday inuu cadaadiyo kulamadeena SEO-ga ee dadku ay u ciyaarayeen si ay u ciyaaraan darajooyinka macaamiishooda - qaar badan oo iyaga ka mid ahna wali waxay la kulmayaan cawaaqibka maanta. Kuweena macaamiishayada ka soo saaray dabka goor hore si wanaagsan ayay qabteen.
Waxaan ku qabaa dareenno isku dhafan sawir-gacmeedkan Meeleynta. In kasta oo aanan midkoodna ku raacsanayn SEO cusub xeeladaha, runtii waxaan haystaa wakhti adag oo aan u wacayo New or SEO xeelado at dhan.
Tani ma aha SEO cusub.
Waa khadka tooska ah, waxa ku jira, iyo istiraatiijiyad bulsheed oo wakhti fiican la tijaabiyey ka hor intaan SEO la dilin Google. Waxaan rajeynayaa in xirfadleyda SEO ay bartaan xeeladaha taas U meelee dukumiintiyada si fiican halkan ayaa loogu wadaa in lagu kaxeeyo kaqeybgal dhab ah iyo u beddelasho noocooda. Rajo kama qabo in la siiyo SPAM-ka toddobaadlaha ah ee aan ka helno xirfadleyda qiimeynta damaanad, In kastoo.
Talooyinka ku jira xogtan ayaa hoos u dhacaya maadaama aysan xisaabtamin dhexdhexaadiyaal, sidoo kale, iyo qaraxa mobilada. Bixinta istiraatiijiyado iyada oo loo marayo dhexdhexaadinno kala duwan, kanaallo iyo xeelado (waraaqo cad, ebook, infographics, video) ayaa muhiim u ah helitaanka dareenka suuqgeynta internetka maalmahan. Oo kulligoodna waxay isku soo rogaan muuqaalkaaga raadinta.
Had iyo jeer waxaan u sheegaa dadka waayeelka ah in SEO ay tahay dhibaato xisaabeed isla markaana dadka waawayn ee xisaabta u jihaysan dhinaca warshadahaas. Suuqgeyntu waa dhibaato aadanaha, in kastoo ay u baahan tahay xalka aadanaha. Qaar badan oo ka mid ah New xeeladaha ayaa ka baxsan awoodaha xirfadleyda SEO ee aan horey ula soo shaqeeyay.
Tags: hubkaagaadhista sumaddadiintablogging shirkadahaistaraatijiyad keywordkeyword taraafikadakasbashada isku xidhkasumad shaqsiyeedDakhligahagaajinta mashiinka raadintaayna search engineSEOtaraafikada bulshadaka qaybgalka isticmaalaha
Midaysan: Madal Hawleedka Bulshada
Suuqgeynta, Iibka & Adeegga: Xeerarka Cusub ee Ka-Qaybgalka Macaamiisha
28, 2013 at 7: 38 AM
Runtii tani way fiicnayd.
Apr 9, 2014 at 4: 38 AM
Muxuu yahay qoraal aad u xiiso badan oo waxtar leh oo aad halkan kuheshay. Waa inaan sheegaa inaan wax cusub ka bartay infographic-ka aad halkan ku wadaagtay. Xaqiiqdii waxaan la wadaagi doonaa qoraalkanaga saaxiibbaday waxaanan runtii rajaynayaa inaan akhriyo waxbadan oo kamid ah maqaalladaadii ugu dambeeyay.